Markuu Instagram kuu sheegayo inaad isticmaale aan la helin ▷ ➡️ Kuwa raacsan ▷ ➡️
March 15, 2021 July 12, 2019 by Akhristayaasha Shabakada
Waxa runtii socda marka Instagram uu kuu sheego isticmaaleha lama helin? Xaqiiqdii way kugu dhacday inaad u tagto bogga saaxiibkiis Instagram iyo farriintaas dhibka leh ayaa kuu muuqanaysa; Dhowr sababood ayaa sidan u dhacaya. Halkan qodobkaan waxaan kaga hadli doonaa sababaha suurta galka ah marka Instagram uu kuu sheego isticmaaleha lama helin.
Fariintani badanaa waxay soo baxdaa marka qofku kaa joojiyo shabakada bulshada. Sidoo kale marka Instagram uu kuu sheego isticmaaleha lama helin Sababta ayaa ah mar haddii lagu xannibo, shabakadda bulshada ayaa kaa joojineysa inaad adeegsato mudnaanta, kiiskan arag ama la macaamil qofka kaa horjoogsaday.
Goorma ayuu Instagram kuu sheegayaa isticmaale aan la helin ?: Halkaan ka raadi!
Hadda, marka Instagram uu kuu sheego isticmaaleha lama helin waa inaad ogaataa oo hubiso inay dhab ahaan kaa horjoogsadeen ama wax kale oo dhibaato ah oo dhacay. Mid ka mid ah qaababka ugu caansan ee loo xaqiijiyo ayaa ah inaad u tagto biraawsarka qaab qarsoodi ah oo ku dheji barta raadinta ee URL-ka adiga oo ku daraya magaca astaanta qofka aad rabto inaad raadiso.
Haddii ay dhacdo in astaanta guud kuu muuqato hab caadi ah, adigoon galin akoonkaaga Instagram, waxay la micno tahay inay hubaal kuu xannibeen. Dhanka kale, haddii ay ku sii wado inay ku tusiso isla fariintii ka socota marka Instagram uu kuu sheego isticmaaleha lama helin Waxay ka dhigan tahay in qofku tirtiray ama ka saaray akoonkiisa shabakadda bulshada.
Marar kale, waxay dhacdaa inaad xannibtay isticmaale, iyo in kasta oo aad furaysay haddana isla 'fariin aan la helin' ayaa wali soo muuqda; Waxay dhacdaa markii astaan ​​la joojiyay bogga Instagram muddo aad u dheer. Hadey arintu sidaa tahay, markaa waxaan sharaxnaa sida loo xaliyo.
Talaabooyinka lagu furayo isticmaale
Tag barta Instagram.
Soo hel astaanta astaanta guud oo aad gasho akaawnkaaga.
Kadib gali astaanta aagga ee ku yaal geeska kore ee midig.
Marka xulashooyinka la muujiyo, xulo midka dhaha "Settings".
Marka xigta, xulo ikhtiyaarka "Asturnaanta iyo Amniga".
Mar haddii tan la sameeyo, gali qaybta “Xisaabaadka Qufulka”.
Halkan waxaa lagu tusi doonaa liiska dadka aad ka xannibtay shabakadda bulshada. Xulo midka aad rabto inaad furato.
Ugu dambayntii, waa inaad doorataa barta soo muuqanaysa hoosta, oo guji "furitaanka".
Marka dhammaan talaabooyinkan la dhammeeyo, waxaad u gudbi kartaa xisaabta guud ee aad furatay oo iska hubi haddii fariimaha "isticmaalaha la helin" uusan soo muuqan doonin. Hadday sidaas tahay, waa sababta oo ah inaad si guul leh u daahfurto isticmaaleha oo labadoodaba mar labaad way is-dhexgeli karaan.
Sidee loo furaa isticmaale aniga igu xiray Instagram?
Isticmaalayaal badan oo barta Instagram-ka ah ayaa la yaaban haddii tani ay macquul tahay, oo aan runtii ahayn. Wali ma jiro qaab kuu oggolaanaya inaad ku kacdo ficilkan. Haddii isticmaale ku xannibay dib uma soo noqon doono, ilaa qofkaasi go’aansado inuu kuu furo mooyee. Haddii ay dhacdo inaad kala duwanaan jirtey, waxaa ugufiican inaad tixgeliso wadahadal shaqsiyeed oo aad xaaladda wax ka qabato meel ka baxsan shabakadda bulshada.
Hadda, marka Instagram uu kuu sheego isticmaaleha lama helin Waxa kale oo jira suurtogalnimada in adigu adigu aad tahay qofka guriga xannibmay. Waxaan kugula talineynaa inaad raacdo talaabooyinka aan kor ku soo sheegnay. Sidan, waxaad markale la falgalin kartaa qofka kale iyo dhanka kale.
Cilad ayaa furitaanka isticmaale Instagram
Mid ka mid ah kiisaska ugu caansan ee lagu helo barta Instagram ayaa ah helitaanka dadka xannibay sababtoo ah waxay leeyihiin kala duwanaansho shaqsiyadeed. Hadda, markii xaaladda la xalliyo, waxay aadaan isticmaaleha isticmaale si ay uga furaan, laakiin waxay ku helaan dhibaato qaab fariin ah. Marka Instagram kuu sheego isticmaaleha lama helin macluumaadka qofkaas, waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad adeegsato qaab kale si aad uga furatid; Tag tillaabooyinka aan kor ku soo sheegnay.
Sabab kale, marka Instagram uu kuu sheego isticmaaleha lama helin waa in qofka kale uu isna kaa hor istaagay. Xaaladdan oo kale, markii labada taariikhdood la xannibay, ma awoodi doonaan inay arkaan howlaha kale ee uu qabto. Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto, sidey macquul ugu tahay in isticmaale kale aniga ii xannibo isla waqtiga aniga? Runtu waxay tahay inay adagtahay, laakiin aan suurtagal ahayn in la gaaro.
Si kastaba ha noqotee, Thanks to horumarka joogtada ah iyo cusbooneysiinta Instagram waa ficil la qaban karo. Tan waxaa u sabab ah kordhinta aan la tirin karin iyo codsiyada guur-guura ee kuu oggolaanaya inaad hor istaagto qof ku horjoogsaday. Taasi waa sababta, marar badan marka Instagram uu kuu sheego isticmaaleha lama helin oo aad horay u furatay isticmaaleha, waa sababta oo ah wuxuu kaa joojiyay.
Si kastaba ha noqotee, tani waxay sidoo kale dhici kartaa sababtoo ah khaladaadka dalabka; Waxay socon kartaa dhowr saacadood. Haddii ay ku sii adkaysato waxaan kugula talineynaa inaad uninstall oo aad dib u dhigto dalabka mar labaad, sidan ayaa loo cusboonaysiin doonaa.
Goorma ayuu Instagram kuu sheegayaa isticmaale aan la helin ?: xannibaadda wadaagga
Sidii aan horay u soo sheegnay. marka Instagram uu kuu sheego isticmaaleha lama helin, ama goortaad qof xannibto oo isagu / iyadu ka baxdaa liiskaaga xannibay, waxay u badan tahay in qofku tirtiray akoonkiisa, ka takhalusay ama kaa xannibay mahadnaqyada codsiyada ama ballaarinta kor lagu soo xusay.
Haddii aad rabto inaad xaqiijiso tan, waxaad ka heli kartaa saaxiib la mid ah isla qofkaas isla markaana hubi inuu arko haddii uu tirtiray akoonkiisa. Ikhtiyaar kale ayaa ah inaad tagto biraawsarkaaga oo aad baarto qaab qarsoodi ah astaanta qofkaas adigoon gelin akoonkaaga shakhsiyeed ee Instagram.
Suurtagal kale ayaa ah in Thanks to codsiyada iyo kordhinta aan hore u soo sheegnay, isticmaaleha ayaa ogaaday in aad xannibtay, oo sidaas darteed isaguna wuu kaa xannibay. Ma ahan wax dhici kara, laakiin adduunka shabakadaha bulshada waxaa ka buuxa waxyaabo badan oo xiiso leh.
Haddii ay dhacdo inaad qof furatay oo aad ogaatay inuu qofkaasi ku xannibay, waxaa jira xalal waxtar u yeelan kara duruufahaas. Marka xigta, wax yar ayaan ka hadli doonnaa.
Mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee aad dalban karto waa inaad raadsato sawir meesha qofkaas lagu calaamadiyay oo isku day inaad gasho astaanta. Bilowga, Instagramka ayaa ku siin kara fariinta “isticmaalaha lama helin”, ha is dhiibin. Iskuday inaad sii waddo illaa aad ka aragto saddexda qodob ee tilmaamaya dejimaha geeska kore ee sare ee astaanta. Mar alla markay muuqato, adigu dooro, waxaad raadineysaa ikhtiyaarka "fur", iyo voila! Waxaad awoodi doontaa inaad mar kale aragto qoraalaha qofkaas.
Haddii ay taasi kuu shaqeyn weydo, waxaa sidoo kale jira xal kale. Isku day inaad ka soo gasho kombuyuutarka, taasna waa inaad ka soo degsataa barnaamijka 'Instagram' dukaanka 'Microsoft Store'. Mar haddii tan la sameeyo, raac dhammaan tillaabooyinka kor lagu soo sheegay si aad uhesho astaanta oo aad u furto.
Koontada Instagram ee shaqsiga ayaa xannibmay: Maxaad qabataa?
Haddii aad halkan timid waa sababta oo ah waxaad u badan tahay inaad dhibbane u ahayd Instagram-ka iyo xiritaanka akoonkiisa sabab la'aan. Taasi waa sababta iyada oo loo marayo maqaalkan, waxaan ka wada hadli doonnaa xalka ugu weyn ee aad u codsan karto furitaanka marinkaaga akoonkaaga Instagram oo aad awood u yeelan karto inaad mar labaad u isticmaasho.
Waxaa muhiim ah in laga fiirsado in xallintaan ay quseeyaan oo keliya xisaabaadka ay Instagram curyaamiyeen ama naafo noqdeen. Haddii, dhinaca kale, Instagram ay tirtirtay koontadaada, talooyinkan lama adeegsan karo. Haddii ay taasi tahay kiiskaaga, waxaan kugula talineynaa inaad abuurto koonto cusub oo Instagram ah.
Sida ugu fudud ee lagu ogaan karo haddii Instagramku xannibay ama xayiray koontadaada, ayaa ah markii aad gasho, farriinta soo socota ayaa u muuqata: "Koontadaada waa la baabi'iyay." Taas macnaheedu waa in koontadaadu wali shaqeyneyso, laakiin ma awoodi doontid inaad soo gasho. Caadi ahaan, tani waxay dhacdaa marka aad ku xad gudubto siyaasadaha ama shuruudaha isticmaalka aaladda.
Si loo xaqiijiyo haddii koontadaada dhab ahaantii la qufulay oo aan la tirtirin, waxaan kugula talineynaa inaad ka gasho taleefan kale. Haddii aad marin u heli karto astaantaada, waa war wanaagsan, maadaama aan la tirtirin. Xaaladdan oo kale, Instagram waxay xayirtay gelitaanka akoonkaaga taleefanka aad ku abuurtay.
Waxaa laga yaabaa inaad daneyneyso: Sidee lagu ogaanayaa haddii lagaa xannibay Instagram?
Markuu Instagram kuu sheego isticmaale aan la helin: Ka soo kabso marin u hel akoonkaaga!
Caadi ahaan, markay Instagram xannibto koonto, waxa madalku sameeyo ayaa xannibaya aqoonsigaaga ama koontadaada gaarka ah ee Google. Haddii ay dhacdo inaad isticmaasho taleefanka Android, waxa ay tahay inaad sameyso waa inaad abuurto koonto cusub oo Google ah. Marka xigta, waxaan sharxi doonnaa tallaabooyinka ay tahay inaad raacdo:
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa uninstall-ka barnaamijka 'Instagram'.
Mar haddii tan la sameeyo, gurmad ku samee taleefankaaga oo dhan.
Ku soo celi taleefankaaga warshaddii asalka ahayd. Hubso inaad haysatid gurmad buuxa oo xogtaada ah, maadaama si otomaatig ah loo tirtiri doono.
Abuur koonto cusub oo Google ah.
Ku xirka koontada cusub taleefankaaga.
Ugu dambeyntiina, kala soo bax oo rakib app Instagram mar labaad.
1 Goorma ayuu Instagram kuu sheegayaa isticmaale aan la helin ?: Halkaan ka raadi!
1.1 Talaabooyinka lagu furayo isticmaale
2 Sidee loo furaa isticmaale aniga igu xiray Instagram?
2.1 Cilad ayaa furitaanka isticmaale Instagram
3 Goorma ayuu Instagram kuu sheegayaa isticmaale aan la helin ?: xannibaadda wadaagga
3.1 Xalalka suurtagalka ah
4 Koontada Instagram ee shaqsiga ayaa xannibmay: Maxaad qabataa?
4.1 Markuu Instagram kuu sheego isticmaale aan la helin: Ka soo kabso marin u hel akoonkaaga!
Markay Instagram xidhaan koonto